I-celestial planisphere: iyini, uyisebenzisa kanjani nokuthi ungayenza kanjani | Isimo Sezulu Senethiwekhi
Ngaphakathi kweqembu lezinsimbi ezisetshenziselwa ukubuka isibhakabhaka sinayo iplanethi yezulu. Kuyaziwa nangegama lendiza yasezulwini futhi akuyona nje ithuluzi lezibalo elisebenzela ukwazi isibhakabhaka ngaphezu komkhathi.Usizo olunikeza lona ngaphezu kwezinye izinsimbi zokubuka ukuthi ungabona umkhathizwe nganoma isiphi isikhathi futhi nganoma yiluphi usuku lonyaka . Umanduleli wayo yi- sibongile, futhi njengaleli, umhlaba osemkhathini waklanyelwe ububanzi obuthile.
Kulesi sihloko sizokutshela konke odinga ukukwazi mayelana neplanethi yezulu lamazulu, ukuthi isetshenziswa kanjani nokuthi yenzelwe ini.
1 Uyini umhlaba wezulu lamazulu
2 Isebenza kanjani iplanethi yasezulwini
3 Kwenziwa kanjani lokhu
4 Kusetshenziswa kanjani
Uyini umhlaba wezulu lamazulu
Lapho sikhuluma ngeplanisphere yasezulwini noma ngohlobo lwethuluzi lezibalo lokho isebenza ukwazi isibhakabhaka emkhathizwe. Ubuhle obuhlinzeka ngaphezu kwezinye izinsimbi zokubuka isibhakabhaka ukuthi singasibona nganoma yisiphi isikhathi nosuku lonyaka. Leli thuluzi lenzelwe ukubuka isibhakabhaka ukusuka ebangeni elithile. Kulokhu, i-planisphere ingama-37 degrees enyakatho futhi ngeke ilungele enye indawo esenyakatho enesimo esikude kakhulu. Akukho okunye ukusho ukuthi ngeke kusize uma kusetshenziswe eningizimu yezwe.
Izinga lokulungiswa kwalo ngama-degree angenhla noma angaphansi kwama-37 degrees North. Lokho wukuthi, ingasetshenziswa ngokuphelele e-Andalusia, eCeuta, eMelilla nakwezinye izindawo ezisemngceleni kanye nanoma yiliphi idolobha emhlabeni elinobubanzi obufanayo. Iplanethi yezulu lamazulu iqukethe amadiski ayizicaba amabili nawayisiyingi anezikhungo ezizungeza ku-eksisi efanayo. Isisekelo sale nsimbi yishadi lezinkanyezi elikhombisa wonke amaqoqo ezinkanyezi nezinkanyezi ezingabonwa esibhakabhakeni. Ibuye ikunikeze ekunciphiseni noma ebangeni eli-angular kuya esigxotsheni sasezulwini esisenyakatho. Lokhu kwehla kungabonakala ukuze wazi izintshisekelo zeplanethi.
Inesigaba esiyindilinga endizeni futhi ihlala icabanga ukuphazamiseka. Okwezulu lezulu lasezulwini, sikhethe ukuqagela okugcina amabanga angular, yize izibalo zihlelelwe kamuva. Enye idiski eyakhiwe ngayo i-opaque ngaphandle kwewindi elincane elisobala okuyilona elimele isibhakabhaka ngenhla kwesibhakabhaka. Unqenqema lwewindi umkhathizwe wesibhakabhaka futhi ulapho singawathola amaphuzu abalulekile. Amaphuzu asenyakatho naseningizimu ahlukile futhi ahlukanisa iwindi libe izingxenye ezimbili ezilinganayo. Kodwa-ke, uhlelo lokuqagela lubeka amaphuzu asekhadinali asempumalanga nasentshonalanga njengangalingani.
Isebenza kanjani iplanethi yasezulwini
Ukuze sisebenzise umhlaba osemkhathini kumele sisebenzise ishadi elingemuva elimnyama. Izinkanyezi ezikhanya kakhulu esibhakabhakeni ezingabonakala kuleli latitude zimelwe kuleli shadi. Amanye amagama ezinkanyezi avezwa ngombala obomvana, i IMilky Way Kwethulwa nge-violet, imigqa yezinkanyezi ngokubomvu namagama ezinkanyezi e-ocher. Eminye imibala esingayihlukanisa eshadini elingemuva elimnyama uhlelo lokuxhumanisa lwenkabazwe oluchazwe ngombala oluhlaza okwesibhakabhaka, i-Equator yasezulwini ngombala wasezulwini kanye ne-ecliptic ngombala ophuzi. I-ecliptic yindlela yelanga phakathi kwezinkanyezi.
Abantu abaningi bayazibuza ukuthi kungani i-planisphere isebenza kuphela cishe kuma-37 degrees latitude latitude. Lokhu kungenxa ye- le latitude yisilinganiso samadolobha ase-Andalusi futhi njengoba kungewona wonke ama-planispheres acabanga ngokusuka ebangeni lethu, le planisphere eguqulwe ngokwengeziwe isakhiwe. Yadalwa e-Andalusia yingakho le latitude.
Kwenziwa kanjani lokhu
Ungenza i-planisphere yasezulwini ngendlela elula. Akuyona enye into ngaphandle kokusikwa futhi okubaluleke kakhulu ukuyiphrinta ngekhwalithi ethile futhi ube nekhono elihle lokusika amaphepha ngesikele. Singaphrinta ishadi lezinkanyezi kushidi elijwayelekile losayizi. Kungakuhle ukwenze ekhadibhodini elimhlophe noma ephepheni lezithombe ukuze libe nekhwalithi ephezulu ekusetshenzisweni kwalo. Kamuva, sizophrinta izinhlangothi zangaphambili nezingemuva kepha ngekhadibhodi enemibala ekhanyayo. Ngemuva kwalokho singasika imiphetho yezithombe zibe izingcezu eziningana. Lapha sizofaka iwindi lobuso bangaphambili obuzosikhomba esibhakabhakeni.
Okulandelayo, sigoqa amathebhu ampunga ohlangothini olungaphambili bese sizofaka iglue endaweni empunga. Sizonamathisela izingcezu zangaphambili nezingemuva bese sishiya ubuso obuphrintiwe bubheke ngaphandle. Uma sesiqede zonke lezi zinyathelo sizobona ukuthi sinohlobo lwemvilophu. Lokhu okungenhla kuyize futhi kukuwo Sizokwethula incwadi eyindilinga enqunyiwe nohlangothi oluprintiwe lubheke efasiteleni.
Lapho sesiqedile ukulungiselela ukwenziwa komhlaba wethu osezulwini, kufanele nje sifunde ukuwusebenzisa ngokuhamba kwesikhathi. Ekuqaleni kungasibiza kakhulu, kepha bese sikujwayela kalula.
Njengoba sikhombisile ukuthi ungazenzela kanjani umhlaba wakho wasezulwini, sizokukhombisa ukuthi kufanele uwusebenzise kanjani. Onqenqemeni lweshadi lezinkanyezi esifuna ukuliphrinta sizobeka izinsuku nezinyanga zonyaka. Esikweleni sobuso bangaphambili amahora kusuka Amahora ayi-18 ntambama aze afike emahoreni angama-06 ekuseni. Izindawo zingamahora endawo hhayi amahora asemthethweni. Lokhu kusho ukuthi isikhathi selanga esishoyo sendawo ngayinye sincike ekuxhumaneni kwendawo lapho sikhona. Ngendlela eseduze singathatha amahora amabili ngesikhathi esisemthethweni uma sisesikhathini sasehlobo nangehora elilodwa uma sisebusika.
Uma ukwelinye izwe kodwa ngobubanzi obufanayo, kufanele wazi kuphela umehluko phakathi kwamahora asemthethweni nesikhathi sendawo yangakini. Ngale ndlela, ungasebenzisa i-planisphere efanayo yasezulwini. Okulandelayo, kufanele ubheke enyakatho futhi kufanele ukhumbule ukuthi i-pole star itholakala maphakathi neshadi lezinkanyezi. Zungezisa i-planisphere yonke ukuze enyakatho kwewindi kufane nomkhathizwe osenyakatho. Amawindi kufanele ngaso sonke isikhathi abe ngaphezu kwesibhakabhaka njengoba amele isibhakabhaka futhi akekho noyedwa ovela ezinkanyezini obheke phansi. Kumele ubheke ukufana phakathi kwezinkanyezi ezikhanya kakhulu esibhakabhakeni nalezo ezikhanya eshadini zisendaweni efanayo. Nakhu ukuthi, kancane kancane, ungazibona kanjani izinkanyezi ezahlukahlukene nemilaza.
Ngiyethemba ukuthi ngalolu lwazi ungafunda kabanzi ngokuthi iyini indawo yasemazulwini yezulu nokuthi isetshenziswa kanjani.
Indlela ephelele ye-athikili: Isimo Sezulu Senethiwekhi » Isayensi yezinkanyezi » Iplanethi yezulu